Fitaovana hopitaly Fandriana hopitaly, latabatra fandriana, latabatra fandriana, seza hopitaly.
Fitaovana fandidiana Latabatra fandidiana, jiro miasa.
Mamindra sarety mamelatra Sarety famindrana tanana, sarety mamelatra hydraulic.
Seza hopitaly Seza mpanatrika, seza dialyzy, seza fampidirana, seza miandry.
Trolley fitsaboana Trolley vonjy taitra, trolley fanafody, trolley Anesthesia, trolley klinika
1. Fametrahana mivantana ny orinasa: fandefasana mivantana, vidiny mivantana, Direct QC, mpiasa maherin'ny 100 miasa mba hiantohana ny ora fandefasana fotoana ara-potoana.
2. Kalitao tsara: Nahazo mari-pankasitrahana CE, ny fanaraha-maso dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fizotry ny famokarana, ny fitaovana ary aorian'ny fametrahana azy, ny famonosana.
3. Serivisy OEM: ekipa R&D TEAM mba hanao tetikasa namboarina, serivisy OEM. Manalavitra an'i Shanghai ny seranana an-dranomasina lehibe indrindra ao Shina, 150 km fotsiny ny halaviran'ny fiara (150km).
4. 8 taona traikefa fanondranana: Manondrana firenena / faritra 60 mahery. USA, UK, ITALY, DUBAI, THAILAND, PHILLIPPINES, SINGAPORE, VIETNAM sns.
Manome lanja ny fangatahana rehetra alefa aminay izahay, manome antoka ny tolotra fifaninanana haingana.
Miara-miasa amin'ny mpanjifa izahay amin'ny alàlan'ny teti-barotra. Omeo ny antontan-taratasy ilaina rehetra.
Ekipa mpivarotra izahay, miaraka amin'ny fanampiana ara-teknika rehetra avy amin'ny ekipa injeniera.
Manaja ny hevitrao izahay rehefa nahazo ny entana.
Manome fiantohana 12-24months izahay rehefa tonga ny entana.
Mampanantena izahay fa ny kojakoja rehetra azo ampiasaina mandritra ny androm-piainany.
Mamaly ny fitarainanay izahay ao anatin'ny 48 ora.
Apetrakay ao anaty fandaharam-pamokarana henjana ny kaomandinao, miantoka ny fotoana fandefanao fotoana ara-potoana.
Tatitra famokarana / fanaraha-maso alohan'ny hamenoana ny kaomandinao.
Fampandrenesana / fiantohana fandefasana aminao raha vantany vao halefa ny kaontinao.
Niorina ny orinasa.
Ny vokatra rehetra dia voamarina CE.
Niditra an-tsokosoko tamin'ny fanamboarana ny fanaka fanaka rehetra ao amin'ny hopitaly
Atombohy ny fampirantiana manerantany
Atombohy ny varotra Multi-Channel
Manondrana firenena sy faritra 20
Ny tahan'ny fanondranana dia mahatratra 1.500.000 $
Trolley laptop, Trolley mpitsabo mpanampy tsy misy tariby, Trolley fitsaboana miaraka amin'ny vatasarihana, Sarety Trolley fitsaboana, Trolley hopitaly, Trolley Medical,